Wadatashiyadii Haweenka Gobolka Benaadir – GMDQ
Waxaa la geliyey Wacyigelin
Wadatashiyadii Haweenka Gobolka Benaadir
18ka Febraayo 2018 magaalada Muqdisho waxaa GMDQ uu ku qabtay kulan ka mid ah kulamadii wadatashiyada geeddi-socodka doorashooyinka qof iyo cod ee guddigu doorashooyinka uu ka waday waddanka. Kulankaan ayaa waxaa ka qayb-galay haweenka 17ka degmo ee gobolka Benaadir.
Guddoomiyha GMDQ marwo Xaliima Ismaaciil Ibraahim oo furitaanka wadatashiga hadal kooban ka jeedisay ayaa haweenka uga mahadcelisay sida baaxadda leh ee ay uga soo qayb-galeen wadatashiyada. Waxay ku ammaantay haweenka sida aad ahmiyadda u siiyeen wadatashigaan. Marwo Xaliima waxa ay haweenka si kooban ugu dul martay safarradii uu guddigu ku kala bixiyay waddanka, magaalooyinkii ay tageen, dadkii ay la kulmeen iyo wixii ay kala soo kulmeen. Waxay sheegtay in guddigu seddaxdii bilood ee la soo dhaafay uu wadatashiyo u tegay in ka badan 20 degmo oo waddanka ah. Waxaan soo aragnay dad quus ka joogaa nidaamka awood qabysiga qabaliga ah ee 4.5 diyaarna u ah in ay ka qaby lixaad leh ka ciyaaraan geeddi-socodka doorashooyinka qof iyo cod ayay tiri guddoomiye Xaliimo.
Marwo Xaliimo, guddoomiyaha GMDQ Waxa ay haweenka xasuusisay in sida keli ah ee ay xuquuqdooda ku heli karaan ay tahay in la helo doorasho qof iyo cod ah sannadka 2020ka, guddiguna uu ku bixinayo dadaal hagar la’aan ah sidii ay doorashadaasi ku qabsoomi lahayd. Ugu danbeyntii waxa ay haweenka kula dardaarantay in ay wacyigooda sare u qaadaan qeybtoodana ka qaataan siyaasadda iyo huggaaminta waddanka.
Guddoomiyaha haweenka gobolka Benaadir marwo Jawaahir Baarqab oo iyaduna kulanka ka hadashay ayaa aad ugu mahadcelisay GMDQ dadaalka ay ugu jiraan in ay aruuriyaan fikradaha iyo talooyinka guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka. Waxa ay sheegtay in haweenka gobolka Benaadir ay ka go’antahay in ay la shaqeeyaan guddiga is gaar ahaanna ay uga caawin doonaan guddiga wacyi-gelinta dadka ku dhaqan gobolka Benaadir. Waxa ay kula dardaarantay haweenkii ka socday 17ka degmo ee gobolka in ay safiirro u noqdaan guddiga oo ay farriimaha loo dhiibo gaarsiiyaan dadweynaha ku dhaqan degmooyinka ay ka kala yimaadeen.
Hadalladii madaxda ka dib haweenka waxay si qota-dheer uga doodeen caqabadaha ka hor imaan kara doorashooyinka 2020ka iyo sidii caqabadahaas loogu gudbi lahaa.
In badan oo ka mid ah haweenkii ka soo qaby-galay wadatashigaan ayaa waxay dareenkooda ku cabbireen sugaanno isugu jiray shirib, Geeraar, gabay iyo heeso.
Waxaa la faafiyey February 19, 2018 August 16, 2018